Izaho sy ny fihibohana – Blaogin'i Voniary
Raha toa ka fotoana nahavery hevitra sy nahakamo ny maro ny fihibohana dia niavaka kosa ny niainako azy, nandritra izay enim-bolana naharetany izay.
Nanery ahy ankolaka…ilay fotoana malalaka nananako
Ho laniko amin’ny inona ny fotoana manoloana ahy? Hoy aho nanontany tena vantany vao nahare fa niditra tao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana i Madagasikara ary mihiboka kosa ny mponinan’Analamanga. Mpiofana eny amin’ny anjerimanontolo moa ka avy hatrany dia niato ny fiofanana, ireo asa madinika natao ihany koa foana rahateo.
Sahala amin’ny nanery ahy ankolaka hieritreritra zava-baovao mantsy ilay fotoana malalaka nananako. Tsy nahazatra ilay mihidy an-trano maharitra ka tonga tamin’ilay fitenenana hoe “lanin’ny trano” na koa hoe “fotsy an-trano” tao.
Nibosesika tao an-tsaiko ny fanontaniana maro, hanao inona? Rahoviana no hifarana ny fihibohana? Haharitra hatramin’ny rahoviana ny tahiry? Ahoana ny fianarana?
Nanosika ahy hiteny ny fahanginana nanodidina ahy
Karazan’irony olona tsy mahasahy miseho vahoaka irony mantsy aho, matahotra maneho hevitra na mizara anefa toa nanosika ahy hiteny kosa ny fahanginana nanodidina ahy, izay no hilazako hoe niavaka ny fihibohana satria toa nisy fahaterahana indray. Tsy nijanona teo amin’ny fiovan-toetra fa nisy fahatongavan-tsaina sy fiovan’ny fomba fijery lehibe koa nanaraka azy.
Mpisakaiza amin’ny penina sy taratasy aho ka nandaniako ora maro nandritra ny fotoana nalalaka nananako ny fanoratana tononkalo. Indrisy, hoy tokoa ny maro hoe zanaky ny taona roa arivo ka tsy mahafehy ny tenin-drazana, variana amin’ny teny vahiny ka manadino fa tsara ny teniny, manevateva izany aza amin’ny fampiasana karazana fanafohezan-teny manimba maso maro. Izaho tokoa mantsy no nanao toy ny valalan’amboa ka na izaho tompony aza tsy tia. Mba tapa-kevitra ihany ny haneho hevitra amin’ny tambajotran-tserasera fesiboky saingy tsy nahay nanao izany raha tsy tamin’ny teny frantsay. Tsy ratsy hoy aho ny mahay mampiasa ny tenim-pirenena hafa, indrindra eo amin’ny sehatry ny tononkalo izay tiako sy nilonako saingy Malagasy no horesahiko, nahoana no teny vahiny no ampiasaiko?
Izy telo mianadahy mpandresy tamin’ny Fifaninana Lahatsoratra Am-blaogy 2020
Nandritra iny fihibohana iny aho no nanandrana nanoratra tononkalo, nizara izay tsapako, ny fihetseham-poko tamin’ny teny malagasy madio rano. Akory ny hafaliako satria dia nahatratra 17 isa ireo nizara izany, tononkalo iray mitondra ny lohateny hoe “ Satria tianao loatra…” , nampita tamin’ny hafa fa misy tia izy, misy miahy ary misy mihaino. Vitsy izany raha jerena amin’ny lanjan’isa fa nanova zavatra kosa ho ahy. Azo anehoana hevitra tsara ny tenin-drazako, tsy manahirana akory izy, ary kanto ery ny rima azo atao amin’ny alalany. Nanomboka teo dia nizara aho, eny hatramin’izao, tsy nitsahatra ny peniko ary eto am-pandalinana ny teny malagasy indrindra aho izao. Hafahafa tamin’ireo efa zatra nahita ahy niteny sy nanoratra tamin’ny teny vahiny ny nahita ireo tononkaloko vaovao sy fomba firesako tamin’ny teny malagasy. Fomba iray izany nentiko nampitana io fitiavako vaovao io, tsy inona izany fa ny teniko.
Sarotra amiko ny miteny hoe tenin-drazako fa aleo hataoko hoe “teniko”, satria ahy ihany koa ary tiako. Variana tamin-javatra maro izay nanjanaka ny saiko aho ka nanadino ny maha izaho ahy manokana, soa fa nisy ny fihibohana nahafahana niaina fiovana maro toa izany.
Voavaly ny fanontaniako teny am-piandohana hoe ho laniko amin’ny inona ny fotoana malalaka hananako? Eny, ho laniko amin’ny taratasy sy peniko, hiangaliako ny teniko.
Rakotoarisoa Ny Tsanta
coronavirus, covid-19, fifanianana lahatsoratra am-blaogy, fifaninanana teny gasy 2.0, fihibohana, teny gasy, teny gasy 2.0, teny malagasy
6 commentaires sur “Izaho sy ny fihibohana”
5 mars 2021 à 9 h 35 min
De miarahaba anao amin’izaao fahaterahana vaovao izao indray! MAnkasitraka amin’ny fizarana ny asa soratrao kanto tokoa!
Miala tsiny amin’ny fahadisoana fanoratra noho ny hamehana: « Dia, mankasitraka, izao »
7 mars 2021 à 16 h 54 min
Tsy misy tsiny e! Teny diso, hono, tsy mba kabary. Mankasitraka ny fahazotoanao mamaky ny lahatsoratra sy maneho hevitra!
Elysé R.Safidinirina dit :
6 mars 2021 à 16 h 28 min
Mahafinaritra raha toa isika mianadahi daholo ni tanora malagasy. 🙂
Sitraka Lalaina dit :
Mankasitraka indrindra amin`ny fizarana ary miarahaba ireo mpandresy. Azo jerena ato amin`ny blaogy ihany koa ve ny asa-tanan`ireo mpandresy azafady? misaotra mialoha
Mankasitraka anao namay! Asa tanana toy inona moa izany?